၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇန်နဝါရီအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုပ်ငန်းသုံး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၆ သန်းကျော် ပိုမိုတင်သွင်း
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်စ ဧပြီလမှ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်အထိ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၃၁၈ သန်းဝန်းကျင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၁၇၁ သန်းဝန်းကျင် ပိုမိုရခြင်းမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှုပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ သင်္ဘောနဲ့သင်္ဘောအပိုပစ္စည်းများ၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ တပ်ဆင်ရေးပစ္စည်းများ၊ လေယာဉ်နဲ့ လေယာဉ်အပို ပစ္စည်းများ၊ တွင်းထွက် (သတ္တုမှအပ) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဖြစ်တဲ့ သံနဲ့ သံမဏိပစ္စည်းများ၊ အခြားစက္ကူများ၊ လုပ်ငန်းသုံးသီးနှံဆီများ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ကုန်ထုတ်စက္ကူများ ကာလတူထက် ပိုမိုတင်သွင်း န
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် (CBD) လမ်းမကြီးနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မင်္ဂလာမူဆယ် လမ်းလျှောက်ဈေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့၊ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်မုခ်ဦး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သောမူဆယ်ဗဟို စီးပွားရေးဇုန်(CBD)လမ်းမကြီးနှင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီမင်္ဂလာမူဆယ်လမ်းလျှောက်ဈေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီ ၁၉ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ရှေးဦးစွာ မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် (CBD) လမ်းမကြီးနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမင်္ဂလာမူဆယ် လမ်းလျှောက်ဈေးမုခ်ဦးအား ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမိုးအောင်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ညွန့်၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးခ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီ (KOTRA) rS Executive Vice President Mr. Yun Wonsok ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာပွင့်ဆန်းသည်ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ကိုရီးယား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီမှ Executive Vice President ဖြစ်သူMr.
ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ဗီးနပ်စ်ဝီလျံအား ဒဏ်ငွေ ပေါင် ၃၅၀၀ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်
သြစတြေးလျ အိုးပင်းတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ၏လက်ရည်စစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်တင်းနစ်မယ် ဗီးနပ်စ်ဝီလျံ သည်ပြိုင်ပွဲအပြီးပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာခြင်းမရှိသည့်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်းနစ် အဖွဲ့ချုပ်ကဒဏ်ငွေ ပေါင် ၃၅၀၀ ပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဘီဘီစီသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ တွင်ကျင်းပလျက်ရှိသည့် သြစီအိုးပင်း တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဗြိတိန်မှ တင်းနစ် ချန်ပီယံ ဂျိုဟန်နာကွန်တာကိုလက်ရည် စစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပင် နှစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြင့် ရှုံးနိမ့် ခဲ့သည်။ယင်းသို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ပွဲအပြီးပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲ ပြိုင်ပွဲကွင်း
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနှေးကွေးကျဆင်းမှုဒဏ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံက အများဆုံးခံရ
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်ပေးရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်မှုက ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းအနိမ့်ဆုံးနှုန်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခုလိုဖွံ့ဖြိုး မှုနှုန်းကျဆင်းမှုကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ကို ကျဆင်းေ စလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း ကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထိခိုက် မှုအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးရှိမှာဖြစ်ပေ မယ့် စင်ကာပူနိုင်ငံက အထိအနာဆုံး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သ
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ချေးငွေအဆင့်ကိုMoody's ကလျှော့ချသတ်မှတ်
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ဈေးကွက် အခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတဲ့အတွကMoody's ချေးငွေအဆင့်သတ်မှတ်ရေး အဖွဲ့ကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ချေးငွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုPositive မှStable အဆင့်သို့ လျှော့ချသတ်မှတ် လိုက်ေ ကြာင်း ရိုက်တာသတင်းမှာ ဖော် ပြထားပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရရဲ့ ငွေပေး ငွေယူလက်ကျန်ရှင်းတမ်းအရ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေခံတွေကို မြှင့်တင်ပေး နိုင်မယ့်အလားအလာတွေကို တွေ့မြင် ရတဲ့အတွက် Moody's က မလေး ရှား နိုင်ငံရဲ့ကြွေးမြီအဆင့်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကA3 အဆင့်ဖြစ်တဲ့Positive အဆင့်မှာ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါ တယ်။ဒါပေမဲ့ အရှေ့တောင် အာရှဒေသမှာတတိယအကြီးမားဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက သ ဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကု
လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ ဗီယက်နမ် အက်စ်အမ်အီးများအတွက် အထောက်အပံ့ လိုအပ်
လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်များမှ အကျိုးအမြတ်များကို ပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ဒီ သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ဗီယက်နမ် ပြည်တွင်းအသေးစားနဲ့ အလတ်စားစီးပွားေ ရး လုပ်ငန်း(အက်စ်အမ်အီး)တွေ သိရှိနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အက်စ်အမ်အီးတွေကကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရာမှာအစိုးရပိုင်ဆိုင်ရာရုံးများက အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဗီယက်နမ်နယူးစ်သတင်း မှာ ဖော်ပြပါတယ်။အေပက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးရဲ့ထုတ် ပြန်ချက်အရ အေပက်ဒေသအတွင်းမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အကုန် ထိ ပြုစုထားတဲ့ စာရင်း အရ လွတ်လပ်စွ
မဲဇာတောင်ခြေ နတ်ရေတွင်း ကျေးရွာမှာ မြို့နယ်အတွင်း ပထမဆုံး စွန့်ဦးလုပ်ကိုင်တဲ့ ရွှေဘိုမြို့သူ ဒေါ်မီ မီမြင့်ရဲ့ ဆိပ်ခွန်လက်ခွဲလက်ရက်ကန်း ကိုကျေးရွာနေပြည်သူများ စိတ်ဝင်စား လျက်ရှိနေပြီး အိမ်တွင်းလက်မှု လုပ်ငန်း ဖြစ်တဲ့ လက်ရက်ကန်းအတတ်ပညာ သင်ယူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုချင် တယ်လို့ကျေးရွာနေ ပြည်သူများထံက သိရပါတယ်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း စက်မှုလယ်ယာ လုပ်ကိုင်လာတဲ့ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။နတ်ရေတွင်းရွာ ကို အိမ်ထောင်ကျပြီး ရောက်လာခဲ့တဲ့ အခါ ဒီဘက်ဒေသမှာ လက်ရက်ကန်း လုပ်ငန်းမရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိပ်ခွန် ရက်ကန်းရှင်တွ
edotco နှင့်Yoma Strategic ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝါတိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀ တည်ဆောက်သွားမည်
မလေးရှားနိုင်ငံမှ edotco Group SdnBhd နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံမှYoma Strategic ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း၍ လာမည့်သုံးနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ပေါင်း ငါးထောင်ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထို့ပြင် edotco ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။edotco ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူSuresh Sidhu က ''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရည် အသွေးမြင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမှာပါ။ သဘာဝသယံဇာတကိုမထိခိုက်စေတဲ့ စွမ်းအင်ထုတ် ယူအသုံးပြုမှုနည်းပညာတွေ၊ နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတဲ့အဆော က် အအ
ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလများတွင် နိုင်ငံတကာမှ ရုံးခန်းနေရာများအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုများ မြင့်တက်လာ
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ပြောင်းလဲမှုများမှာ သိသာလာခဲ့ရာ မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေရှာဖွေရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်သည့်House.
မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု၊ ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ မျိုးစေ့သစ်များ မိတ်ဆက်ပြသ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ၂၀၇၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စပါးအထွက်နှုန်း ထက်ဝက်ခန့် ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများကဆို
ဗီယက်နမ် စက်ရုံများရဲ့သြဂုတ်လ သံမဏိသုံးစွဲမှု ကျဆင်း
ဈေးမာလာတဲ့ ပြည်ချင်း (ဥမ) ဈေးကွက်
မန်ကျည်း တန်ချိန်နှစ်ရာကျော် တင်ပို့နိုင်